Edson Glauber - Masaka ny fotoana - Countdown ho an'ny fanjakana
Edson Glauber - masaka ny Times
Izahay dia	Edson Glauber	tamin'ny 2 jona 2020:
Anaka, maro no henjehina, nefa aza matahotra na inona na inona. * Miantehera amin'ny fiarovana ny Tompo isan'andro, satria sitrany ny hamonjy izay mino amin'ny hadalana fitoriana. ** Maro no hiantso anao hoe adala sy malemy, saingy tadidio, anaka, fa ny hadalan'Andriamanitra dia hendry noho ny fahendren'olombelona, ​​ary ny fahalemen'Andriamanitra dia mahery noho ny herin'ny olona. Andriamanitra foana no mifidy ny zavatra adala eto amin'izao tontolo izao mba hampahamenatra ny hendry ary mifidy ny osa eto amin'izao tontolo izao mba hampahamenatra ny mahery. Ireo izay tsy manan-danja indrindra eto amin'ity tontolo ity, izay tena atambatra, ary ireo tsy misy olona dia mampihena ireo izay tsy misy na inona na inona, mba tsy hisy hirehareha eo anatrehany.
Izao no fotoana hampiasanao ny fitaovam-piadiana sarobidy indrindra amin'ity ady ara-panahy lehibe misy eo amin'ny tsara sy ny ratsy ity: ny Eokaristia, ny Tenin'Andriamanitra, ny Rosary ary ny fifadian-kanina - natao tamim-pitiavana - ho toy ny famerenana sy famerenam-po ny fahotanao ary ny fahotan'izao tontolo izao.
Miasa amin-katezerana i Satana, te-hampihena ny Fiangonana Masina satria tsy avelanao hihaino ahy izy ary tsy hampihatra ny antso nataoko. Rahoviana ianao no hanapa-kevitra ny hihaino sy hino ny teniko amin'ny maha-Neny izay tena miahy ny fahasambarana sy ny famonjenao mandrakizay? Ny ratrako tsy maratra dia maratra sy mibontsina noho ny tsy finoanao, ny tsy fankatoavanao ary ny hamafin'ny fonao.
Henoy ny feon'ny Zanako Jesosy zanako, ankatoaviko ny antsony masina ary ataovy izay rehetra andidiany anao, amin'ny alalako, ny reninao tsy mety manao ahoana. Izy no miantso anao amin'ny alalako.
Miova mai, satria izao no fotoana, alohan'ny andro hampitahorana kokoa, amin'ny fisedrana lehibe sy maharary kokoa, miaraka amin'ny fiovam-po ho lasa sarotra kokoa ho an'ny maro.
Niresaka tamiko ny zavatra hafa manokana ny reny Nisaotra ary nilaza tamiko hoe:
Betsaka ny tsy mahatakatra ny maha-zava-dehibe ny fisian'i Joseph my Spice *** sy ny herin'ny fanelanelanana amin'izao vanim-potoana izao ho an'ny Fiangonana Masina sy ho an'izao tontolo izao, fa rehefa manomboka ireo zava-miafina lehibe hitranga, dia aorian'ny tsirairay. ny iray hafa, hihiratra ny mason'ny maro, ary ho azon'izy ireo ny antony nangatahan'ny Tompo ny rehetra hitia sy hanome voninahitra an'i Saint Joseph, mametraka ny tenanao eo ambanin'ny Holy Mantle amin'ny fiarovana ny razana. Indro, efa masaka ny fotoana. Miovaova, miovaova, miova fo!
Mitsodrano anao aho!
** Fanamarihan'ny mpandika: ity andalana iray manontolo ity dia tokony ho takatra amin'ny mason'ny 1 Korintiana 1: 20-29, izay voatonona na voatonona amin'ny toerana maro:
Aiza ny hendry? Aiza ny mpanora-dalàna? Aiza ny mpangataka amin'izao vanim-potoana izao? Tsy nataon'Andriamanitra hadalana va ny fahendren'izao tontolo izao? Satria, tamin'ny fahendren'Andriamanitra, izao tontolo izao dia tsy nahalala an'Andriamanitra tamin'ny fahendrena, Andriamanitra dia nanapa-kevitra, tamin'ny alàlan'ny hadalan'ny fanambarana nataontsika, hamonjy ireo mino. Fa ny Jiosy mangataka famantarana ary ny Grika maniry fahendrena, fa izahay kosa manambara an'i Kristy voahombo tamin'ny hazofijaliana, fahatafintohinana amin'ny Jiosy ary adala ho an'ny hafa firenena, fa amin'izay antsoina koa, na ny Jiosy na ny Grika, dia Kristy no herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny hadalan'Andriamanitra dia hendry noho ny fahendren'olombelona, ​​ary ny fahalemen'Andriamanitra dia mahery noho ny herin'ny zanak'olombelona. Diniho ny antsonao, ry rahalahy sy rahavavy: tsy maro aminareo no hendry noho ny fitsipiky ny olombelona fa tsy maro no mahery, tsy maro no teraka nateraka. Fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidin'Andriamanitra hampahamenatra ny hendry; Nofidin'Andriamanitra izay malemy amin'izao tontolo izao mba hampahamenatra ny mahery; Nofidin'Andriamanitra izay ambany sy nohamavoina eto amin'izao tontolo izao, ny zavatra tsy misy, hampihena ny zavatra tsy misy, mba tsy hisy hirehareha eo anatrehan'Andriamanitra. (Fandikan-teny Katolika Vaovao nohavaozina)
*** Mamaky: Ny ora Masindahy Joseph nataon'i Mark Mallett
* Hijery Aza matahotra! miaraka amin'ireo Mpanome fanampiana anay,
Mark Mallett sy ny Prof. Daniel O'Connor:
← Jennifer - Ilay mivelatra…
Fifandraisana ao an-tanana? Fizarana I →